ကိုယ့် Account Password ကို မကြာခဏချိန်းဖို့လိုလား...? | Online Service Center Myanmar -->
ကိုယ့် Account Password ကို မကြာခဏချိန်းဖို့လိုလား...?
ဟိုးယခင်တုန်းကရော၊ အခုအချိန်ထိရော၊ တစ်ချို့တွေမှာ Account Password တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွဲမှားနေတဲ့အယူအဆလေးတစ်ခုရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒါကဘာလည်းဆိုတော့ ကိုယ့် အကောင့်ရဲ့Password တွေကိုခနတိုင်းချိန်းပြီးသုံးဖို့အကြံပေးထားကြတာတွေနဲ ့မကြာခဏချိန်းသုံးတတ်ကြတာတွေပါပဲ။ အဲ့လိုချိန်းပြီးသုံးနေရင်မကောင်းဘူးလား၊ ကောင်းလားလို့မေးလာခဲ့ရင်၊ ကောင်းလည်းကောင်းတယ်၊ မကောင်းလည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာပါ။
ကောင်းတာက ခနတိုင်းချိန်းသုံးနေတဲ့အတွက် ကိုယ့်အကောင့် Password ကိုအခြားသူကသိနေခဲ့ရင် or Phishing တစ်ခုခုမှာဝင်မိထားခဲ့ရင် Password ချိန်းလိုက်တဲ့အတွက် သူတို့သိထားတဲ့ Old Password နဲ ့ကိုယ့်အကောင့်ကိုဝင်ကြည့်လို့မရနိုင်တော့တာကြောင့်ပါ။ နောက်တစ်ခုက အမြဲတမ်းမကြာခဏချိန်းနေတဲ့အတွက် ကိုယ့် Password ကိုအလွယ်တကူမှတ်မိနေစေနိုင်လို့ပါ။
မကောင်းတာက Password တွေခဏတိုင်းချိန်းသုံးနေတဲ့အတွက် မှတ်ရတာတွေများပြီး၊ ဘယ် Password မှန်းမသိတော့ပဲရောထွေးပြီး၊ ကိုယ့်အကောင့်ကို အမှတ်မထင် Logout လုပ်မိပြီးပြန်ဝင်ချိန်မှာ ပြန်ဝင်လို့မရတော့တာတွေဖြစ်စေနိုင်လို့ပါပဲ။
ဒီနေ့Post တစ်ခုအောက်မှာ Password ချိန်းသုံးပါဆိုပြီးပြောထားတာတွေတွေ ့တော့ အောက်အတိုင်းလေး Reply Comment ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါလေးကို Knowledge Sharing အနေနဲ့Post အနေနဲ့ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Password ခနခန ချိန်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျ။ Password ကို Secure ဖြစ်အောင် Strong ဖြစ်စေမယ့် Password ကိုပေးထားပြီး တစ်သက်လုံးမချိန်းပဲသုံးလို ့ရပါတယ်။
အဓိက ကတော့ ကိုယ့်အကောင့်ကိုယ် Security မြှင့်ထားပြီး Security Knowledge လေးတွေရှိထားဖို့ပဲလိုတာပါ။
Security Knowledge ဆုိတာက... တွေ့ကရာ Website တွေလျှောက်မဝင်တတ်တာ၊ တွေ ့ကရာ App တွေ Game တွေကို လျှောက်ဝင်မသုံးတာမျိုးတွေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ရင် ကိုယ့်အကောင့်ခိုးယူခံရနိုင်တယ်၊ အဲ့ဒါမျိုးတွေကို ဆောင်ရမယ်၊ ရှောင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကို သိထားဖို့လိုတာကိုပြောတာပါ။
Password ခနတိုင်း ချိန်းခြင်း၊ မချိန်းခြင်းနဲ့ကတော့ အကောင့် Security ပိုင်းနဲ့တိုက်ရိုက်တော့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။
Password တော့ခနတိုင်းချိန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် အရမ်းလွယ်လွန်းနေတဲ့ ကိုယ့်နာမည်၊ ကိုယ့်မွေးနေ့၊ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်၊ ချစ်သူခင်သူရဲ့နာမည်၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နာမည်၊ အစဉ်လိုက် အက္ခရာ( နမူနာ - ABCDEFG )၊ အစဉ်လိုက်ဂဏန်း ( ဥပမာ - 123456 )၊ လိုဟာမျိုးတွေပေးရင် ကိုယ့်အကောင့်ကို Test လုပ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင် ကိုယ့်အကောင့်က အလွယ်တကူပါသွားနိုင်ပါတယ်။
Login ဝင်ရာမှာသုံးတဲ့ Email or Phone Number မသိပဲနဲ့ Password တစ်ခုပဲသိရုံနဲ့အကောင့်ထဲဝင်လို့ရလို့လားဆိုရင်? Facebook account တစ်ခုကို Login ဝင်ဖို့အတွက် User name နေရာမှာ တကယ့် Email or Phone Number အစား သုံးလို့ရတဲ့ User name တွေက ၂ မျိုး ၃မျိုးထိရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဓိက လိုအပ္တာက Password ကိုအလြယ္မေပးဖုိ ့၊ Security မြှင့်ထားဖို့၊ Security Knowledge လေးတွေရှိထားဖို့၊ ဆုိတဲ့ ( ၃ ) ခ်က္ပဲ အဓိကလိုအပ္ပါတယ္ဗ်။
ဒီလောက်ဆို Password ခနတိုင်းချိန်းသုံးတာမျိုးလုပ်ဖို့ လိုတယ်၊ မလိုဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားကြမယ်ထင်ပါတယ်။
Aung Kyaw Soe ( 8:21 PM - 4.3.2019 )